Xiaomi Mi MIX Alpha: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
IXiaomi Mi MIX Alpha: Iselfowuni enesikrini esikwi-360-degree phantse
Emva kweentsuku ezininzi nazo zonke iintlobo zamarhe, IXiaomi Mi MIX Alpha sele ihanjisiwe ngokusemthethweni e China. Malunga nale fowuni kubekho amagqabantshintshi amaninzi, ikakhulu ngenxa yesikrini sayo esigobileyo, ethembisa ukuba yeyona inkulu kwintengiso. Uphawu lwaseTshayina lusishiya ngesixhobo esimangalisayo, esitsha nesiyingozi, esifuna ukubonelela ngento entsha kwintengiso.
Iza nescreen esinemiphetho egosogoso, Ukongeza ekusebenziseni ikhamera ye-108 MP, ifowuni yokuqala kwintengiso. Nceda le Xiaomi Mi MIX Alpha ibe kwindawo ephambili ngokwenziwa kwezinto, ukongeza ekuhlaziyeni ngokupheleleyo olu luhlu lweefowuni ezivela kumenzi.
Uyilo ngokungathandabuzekiyo yeyona nto iphambili kwifowuni. Iscreen esikhulu esigobileyo, esinokuthi siqwalaselwe phantse isikrini se-360 degree, enkosi kolu luyilo. Ukongeza, izakhelo kwifowuni zincitshisiwe ziye phezulu, ukuze zisetyenziswe ngcono emzimbeni wesixhobo. I-brand ibizwa ngokuba yi-4D ejikeleze umboniso wejika. Olu luyilo luthetha ukuba kukho iikhamera zangasemva kuphela.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi MIX Alpha
Ukucaciswa kweXiaomi Mi MIX Alpha
Kwinqanaba lobugcisa, Le Xiaomi Mi MIX Alpha isiphelo esiphezulu. Iza neprosesa efana naleyo ikwiMi 9 Pro 5G eboniswe kulo msitho. Ke sinokulindela ukusebenza okuhle kwesi sixhobo sophawu lwesiTshayina. Iprosesa elungileyo, kwaye iba yifowuni yokuqala kwintengiso ngekhamera ye-108 MP, ukuyenza nokuba ibe nobuchule ngakumbi. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Bonisa: I-6 intshi ye-AMOLED ene-20: 9 ratio kunye ne-90 Hz yokuhlaziya inqanaba
I-RAM: 12 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 512 GB
Inkqubo yokusebenza: I-Android 10 ene-MIUI 11 njengomaleko
Ikhamera esemva: I-108 MP + i-20 MP ye-angle ebanzi engaphezulu + ye-12 MP nge-x2 zoom
Ibhetri: 4.050 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza okungu-40W kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo angama-30W
Ukunxibelelana: 5G, WiFi 802.11 a / c, iBluetooth 5.0, GPS, Uhlobo lwe-C lwe-USB
Abanye: Isivamvo seminwe esingaphantsi kwesikrini
Inamandla, ine-5G, ineekhamera ezinomtsalane kunye noyilo olutsha. Zizinto eziphambili zeli Xiaomi Mi MIX Alpha. Inkampani ibheja kwi-Snapdragon 855+ njengeprosesa, eyinika amandla amakhulu, ukongeza ekwenzeni ixhase i5G. Inkangeleko ebalulekileyo kwifowuni enje. Iimodeli ezimbini ezintsha ezine5G ngumenzi waseTshayina kule nkalo. Iza nendibaniselwano eyahlukileyo ye-RAM kunye nokugcinwa.
Iikhamera yenye yamandla esi sixhobo. Inzwa ephambili kwiXiaomi Mi MIX Alpha yi-108 MP. Iba yifowuni yokuqala kwintengiso yokuba nekhamera yolu hlobo. Enkosi kwezi zivamvo, ifowuni iyakwazi ukuvelisa iifoto ezili-12.032 x 9.024 zeepikseli. Into enomdla, kodwa oko kuthetha ngokucacileyo ngamathuba abaza kusinika wona malunga noku. Iya kusinika ubukhali kude kube ngoku bekungacingeki kwaye kungaziwa kwiifowuni eziphathwayo. Kunye noluvo oluphambili, kusetyenziswa i-20 MP ye-engile ebanzi kunye nefowuni ye-12 MP kule meko. Kwifoto ungazibona ngakumbi ezi zinzwa.
Uyilo luseyona nto iphambili kule Xiaomi Mi MIX Alpha. I-brand ithathe umngcipheko ocacileyo, ngescreen esikhulu kakhulu, esisebenzisa amacala ezaziso ngendlela enomdla kakhulu. Ngale ndlela, amava ahlukileyo, okuntywiliselwa ngakumbi kumsebenzisi anikezelwa, ngokungathandabuzekiyo awanceda ukuzehlula kwezinye iimodeli zentengiso. Enkosi kolu luyilo, ulawulo lokuchukumisa lwenziwe lwasebenza kuyo yonke ipaneli. Ubukrelekrele bokwenyani bukwaziswa ukunciphisa ukuphathwa kwesiporho kwisixhobo.
Kwakhona ibhetri yenye into ebalaseleyo. Ifowuni inebhetri yomthamo we-4.050 mAh, kodwa apho kukho iindaba ezimnandi kukutshaja kwayo okukhawulezayo kunye nokungenazingcingo, ngakumbi kule yesibini. Njengoko yenza intlawulo ekhawulezayo efanayo neMi 9 Pro 5G, eyakho intlawulo athe uXiaomi wayinikezela ngokusesikweni ekuqaleni kwale nyanga, evumela amandla angama-30W ngokutshaja ngaphandle kwamacingo. Iya kusebenza kakuhle kule meko ngokunjalo.
Ifowuni enje, enobuchule kunye novavanyo, ngokuqinisekileyo ngumngcipheko woluhlobo, kodwa ithembisa ukuba iyifowuni evelisa umdla kwintengiso. Inkampani ibhengeze ukumiliselwa kwale Xiaomi Mi MIX Alpha e China. Okwangoku ayaziwa ukuba izakuqaliswa kwezinye iimarike. Kulindelwe ukuba kunjalo, kodwa kuya kufuneka silinde isibhengezo esenziwe ngumenzi uqobo malunga noku.
Into esele siyazi lixabiso eliza kuba nalo e-China. Njengoko sibonile kwinkcazo yayo, ikhutshwa kuhlobo olunye lwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwiivenkile. Le nguqulo iza nexabiso le-19.999 yuan, emalunga nee-2.560 zeerandi zokutshintsha. Sinethemba lokuba siya kuba nolwazi malunga nokuqaliswa kwayo ngaphandle kwe China kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX Alpha: Iselfowuni enesikrini esikwi-360-degree phantse
I-OPPO A11x: Uluhlu oluphakathi lwebrand entsha lusemthethweni